भारतीय मिडियाको अपराधिक चरित्र : राजेन्द्र अर्याल « हाम्रो ईकोनोमी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा आफूले चट्टानी अडान लिएकाले भारत र आफ्नै पार्टीका केही नेता आफूलाई सरकारबाट हटाउन लागिपरेको पटक पटक सार्वजनिक रुपमा भन्दै आइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने जसरी नै पछिल्ला दिनमा केही भारतीय संचारमाध्यम ओलीविरुद्ध बिषबमन गर्दै उत्रेका छन् । पछिल्ला दिनमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेदेखि नै भारतीय मिडिया प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उत्रदै आएका छन् ।
भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएका बेला ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले जुन ढङ्गले राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिनुभयो त्यसपछि भारतीय मिडियाले उहाँका विरुद्ध प्रहार सुरु गरेका हुन् । पछिल्लोपटक नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ओली विरुद्ध भारतीय संचारमाध्यम अनर्गल र स्तरहीन रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । अहिले हेर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गरेजस्तो देखिए पनि अन्तर्य चाहिँ नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको आक्रमण हो यो । यो मात्रै होइन भारतीय सञ्चारमाध्यमले शृंखलाबद्ध रुपमा नेपालको बेइज्जत र अपमान गर्दै आएका छन् ।
नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रहत्या गर्नेगरी निरन्तर अभियान नै चलाएका छन् । कहिले चीनले उचाल्यो भनेर त कहिले नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीसँग जोडेर त कहिले के जोडेर प्रोपोगन्डा चलाइरहेका छन् । जुन शैली आपत्तिजनक र निन्दनीय त छँदैछ, यो ब्यक्तिको अस्मितामाथिको प्रहार पनि हो । यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मा दरार ल्याउने काम गरेको छ भने दुई देशका जनताबीचमा पनि दुस्मनी गरेको छ । यो कार्य गम्भीर अपराध हो । ओलीमाथि बिषबमन गरिरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यम अहिले नेपालविरुद्ध अनेक प्रोपोगन्डा चलाउँदै एककोहोरो प्रलाप गरिरहेका छन् ।
पत्रकारिताको विश्वब्यापी मान्यता र धर्म विपरीत प्रधानमन्त्री ओली र सिङ्गो नेपालमाथि घृणित आरोप कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य छैन । यसर्थ भारतीय सञ्चारमाध्यमको यस्तो घृणित, घिनलाग्दो, गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक कार्यको विरुद्ध सबै नेपाली एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न जरुरी छ । एकातिर भरतीय मिडिया द पायोनियरले भारतको संस्थापनले नरुचाएको भनिएका हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न अर्थात् ओलीको सत्ताको भविष्य निर्धारण गर्न भारतीय गुप्तचर संस्थाका उच्चस्तरीय अधिकारीहरु काठमाडौमा राजनीतिक भेटघाट ब्यस्त रहेको समाचार सार्वजनिक गर्नु र अरु केही मिडियाले ओली सरकार ढल्दैछ भनेर एकोहोरो ढङ्गले प्रचार गर्नुलाई केवल संयोगमात्र मान्न सकिदैन । त्यससँगै ओलीको चरित्रहत्या गर्ने तहमा उत्रनु निकै गम्भीर र सोचनीय बिषय हो ।
नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि यो हर्कत गर्ने यस्ता भारतीय च्यानल नेपालीले पैसा तिरीतिरी किन हेर्ने ? अहम् प्रश्न उठेको छ । त्यस्ता च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने नागरिक आवाज पनि उठेको छ । यस बिषयमा नेपालमा रहेका ती मिडियाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ ।
त्यसैगरी परराष्ट्र र सञ्चार मन्त्रालय, भारतस्थित नेपाली दूतावासले यस बिषयमा परिणाममुखी पहलकदमी लिन ढिलाइ गर्नुहुन्न । त्यसैगरी नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर भन्नुपर्यो, किनकि संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भएको दाबी गर्ने भारतको यो पीतपत्रकारिताले दुई देशको सम्बन्धलाई कता लैजाँदैछ ? भारतको यो बिकृत पत्रकारितालाई त्यहाँको सत्ताले नै संरक्षण गरिरहेको छ कि भन्ने आशंका पनि नेपालीले गरेका छन् । त्यहाँको सत्ताको चरित्र मिडियामार्फत् प्रतिबिम्बित र प्रतिध्वनित त भएको होइन भन्ने बिषय पनि उठ्न थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा यसरी फेक न्यूज उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने भारतीय मिडियालाई नेपालमा रोक लगाउनुपर्ने माग नागरिक तहबाटै आइरहेको छ ।
यो बेला उत्तेजित हुनेभन्दा पनि केही न केही एक्सनमा जान जरुरी देखिन्छ नत्र भने भारतीय मिडिया नेपालविरुद्ध जे बोले लेखे पनि हुन्छ भनेर भोलि झन् झन् छाडा ढंगले प्रस्तुत हुनेछन् । यस बिषयमा विश्व प्रेस काउन्सिल छ, जस्को नेतृत्वमा प्रेस काउन्सिल नेपाल छ । यसमार्फत् भारतीय प्रेस काउन्सिललाई सोध्न सकिन्छ । जे होस् यो बेला नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथि दुषित ढंगले प्रचार र प्रहार गर्ने भारतीय मिडियामाथि सरकारले केही न केही एक्सन नलिए भोलि झन् उनीहरुको मनोबल बढ्ने छ भन्ने कुरा बुझ्दै आवश्यक कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।